Wiilkii uu Qadaafi ugu jeclaa ilmihiisa miyaa madaxweyne ka noqon ra
Home Warar-ka Wiilkii uu Qadaafi ugu jeclaa ilmihiisa miyaa madaxweyne ka noqon raba Liibiya?
Wiilkii uu Qadaafi ugu jeclaa ilmihiisa miyaa madaxweyne ka noqon raba Liibiya?
Wiilka uu dhalay hoggaamiyihii la dilay ee Liibiya, Mucamar al-Qadaafi, ayaa isu diiwaan geliyay inuu ka qayb galo doorashada xilka madaxweynaha ee markii ugu horreysay si toos ah uga dhaceysa dalkaas bisha dambe.
Saif al-Islam Qadaafi ayaa ahaa wiilka uu adaafi ugu jeclaa carruurtiisa, sida uu ku muujiyay qaabab badan, isagoo mar walba gacanta wadan jiray xilliyada uu ka qayb galayo isu soo baxyada iyo kulamada ay ku jiraan kuwa caalamiga ah. Ilaa yaraantiisii waxa uu ahaa mid lagu daba arko aabihiis oo ka mid ahaa hoggaamiyeyaasha horseedka u ahaa carabta iyo Afrika.
Xitaa mar waxaa loo arki jiray inuu ahaa ninka xilka ka dhaxli doona aabihiis, balse taageeradii uu u muujiyay howlgalki gacanta birta ah loogu wajahay mudaharaadeyaashii 10 sano ka hor kacdoonka sameeyay ayaa magiciisa dhulka la galay.
Tan iyo markii ay shacabka kacdoonka sameeyeen sanadkii 2011-kii, Liibiya ayaa ku jirtay dagaal sokeeye.
Ururrada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa walaac ka muujiyay natiijada ka dhalan karta doorashada ay codbixinteeda dhici doonto 24-ka bisha December, iyagoo ka cabsi qaba inay noqon weyso mid caddaalad ah.
Dalalka awoodaha caalamka iyo xog hayaha guud ee Qaramada Midoobay ayaa ka digay in qof walba oo isku daya carqaladeynta habsami u socodka doorashada ama farogalin ku sameeya natiijada uu wajihi doono cunaqabateynno.
Sawirro iyo muuqaallo ku wareegaya baraha bulshada ayaa muujinaya Saif al-Islam Qadaafi oo hor fadhiya boor ay ku xar dhan yihiin sawirrada ololaha doorashada, isagoo saxiixaya warqadaha isdiiwaangelinta doorashada.
Previous articleWaa kuma hogaamiyaha cusub ee booliska adduunka ee lagu dhagan yahay?